Finn kanye Spin Swirly | Top Slot Site | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
Finn And Spin Swirly kuyinto Online Slot Game ukuthi ine-Irish temdzabu indaba ephathwayo. Yakhiwe ngu- NetEnt, lokhu slot isiqophi iza izimpawu ezijwayelekile ezifana Amabha, izinsimbi, Horseshoes futhi four-leaf Clovers. It Ubuye Cluster Pays uhlelo ngokuwina endaweni kunokuba payline uhlelo lwakho njalo. Zonke lezi nokunye okuningi wenze lokhu online slot kufanele eyodwa ukuze uhlole. Ungathola eminye imininingwane mayelana nale slot kusukela Ukubuyekeza ngezansi.
Unayo 5 imigqa 5 reels kule Online Slot Game. Njengoba lalithe azikho payline asebenzayo kuyatholakala, ngakho onqobayo kuthiwa wathola lapho ufike yinhlanganisela imifanekiso ezifanayo kwi itolitji eduze kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla kanye phezulu kuya phansi. Finn And Spin Swirly udlalwa nge nombono 10p ngoba spin ngamunye. Lena abagembuli ezingeyona ingozi dream, Nokho, unga kuze ngezimali zakho spin ngayinye njengoba eliphezulu £ 200 uma ufuna ethe xaxa ngenxa yemizamo yakho.
Ibhonasi Izici Iyatholakala In The Base Game
Ngo base umdlalo yalesi Online Slot Game, ungathola ukudlala ezine ngezikhathi afinyelelwe izici ibhonasi. Lawa okuyi "Dragon Destroy", le "Magic Guqula", "Luck Irish" futhi "Starfall Wilds".
Nge Dragon Destroy, une izimpawu ayingxenye yinhlanganisela ngokuwina eziqhumayo. ke Letimphawu uzobe Ikhutjhwe yi abasaqala ukufunda ngaye futhi ngethemba, cluster onqobayo entsha uzobe kwakhiwa futhi umjikelezo uyaqhubeka. Magic Guqula izovuleka inhliziyo futhi abakuthola (ongaphakeme-value izimpawu) ku izimpawu kanye nezinombolo elasungulwa yinhlanganisela bese bavula cluster win kwinzuzo.
Irish Luck kuyodingeka izimpawu ezifanayo endaweni ku yomibili imigqa mpo futhi enezingqimba eduze zokuthuthukisa cluster yakho kwi. Ngokolunye uhlangothi, isici Starfall Wild kuyodingeka eziningi kuneziyisihlanu Star Wild imifanekiso on the itolitji ukusiza nge zasendle abasizwa cluster onqobayo.
Irish-ezinezihloko Izimpawu Of Lokhu Online Slot Game
Amatshwayo lokhu Online Slot Game kukhona Irish-ezinezihloko. Une abakuthola, izinhliziyo, acorns, Horseshoes lucky, four-leaf Clovers futhi ibe ngeyamarubi. Nge ngeyamarubi lezinhlanu itolitji, ungakwazi uthole Okuphindaphinda 50x esigxotsheni. Njengoba kushiwo ngaphambili une Star Wild futhi ngaleyo ndlela uphawu uzothatha indawo ka imifanekiso ngaphandle Ukhiye scatter isithonjana.
Lokhu slot isiqophi has a emnandi okwasemuva sigameko kanti ihluzo zinkulu ngokulinganayo. I-Cluster Pays isistimu ingakwazi bakuthande impela wenkokhelo ehloniphekile futhi onqobayo kuyinto esingayithola njengomholo njalo kanye ikakhulukazi nge izici base game etholakalayo.